Muxuu ka yiri Mourinho qaladaadka Marcos Rojo? – Gool FM
Muxuu ka yiri Mourinho qaladaadka Marcos Rojo?
Liibaan Fantastic December 15, 2016
(Manchester) 15 Dis 2016 Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa difaacay laacibkiisa Marcos Rojo kadib eedeyntii uu kala kulmay tababare Alan Pardew kulankii xalay.
Marcos Rojo ayaa ku sigtay in loo taago calaamada casaanka bilowgii ciyaarta markaas oo uu qalad muuqda ku galay laacibkii hore ee Man United Wilfried Zaha.
Alan Pardew ayaa ku dooday in Rojo uu u qalmay casaan toos ah, wuxuuna yiri: “Wuxuu ku booday labada lugood ee Zaha, dhamaan waan arki karnay isku dhacooda, wuxuuna u qalmay in la siiyo casaan”.
Laakiin Jose Mourinho ayaa difaacay laacibkiisa wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay laacib nadiif ah, balse ay ka tanbadatay xamaasada ciyaarta.
“Sifiican ayuu u ciyaarayaa, waa laacib nadiif ah, xamaasadu waa dabeecad ku duugan maadama uu yahay Argentines, laakiin waa laacib fiican oo nadiif ah, wuxuuna ciyaarayaa kubaddii ugu fiicnayd xirfadiisa” ayuu yiri Mourinho.
“Kama hadlin qaladkii David Luiz uu ku galay Fellaini, sidoo kale qaladkii uu Danny Rose ku galay Mkhitaryan, sidaas darteed kama hadlayo dhacdadaan”.
SAWIRRO: Real Madrid oo iska xaadirisay FINAL ka Club World Cup
Maxay ka dhignayd guushii Real Madrid ay maanta ka gaartay kooxda Club America iyo goolkii Cristiano Ronaldo?